Sajdat al-tilaawah with Myanmar Translations – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on August 24, 2010 August 24, 2010 by kyawkyawoo	Posted in Sajdah al-tilaawatTagged al Quran, allah, burmese muslim, burmese muslim minority, islam, Islam. myanmar muslim prayer, Myanmar Muslim, Myanmar Muslims, ramadan, religion, Sajdah al-tilaawat, Sajdah al-tilaawat with Burmese Translations, Sajdah al-tilaawat with Myanmar Translations, Sajdat al-tilaawah, Sajdat al-tilaawah Burmese myanmar translation
What is Sajdat al tilaawah?
7#206#ဧကန်မလွဲ အသင့်အား ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသော အရှင်မြတ်၏အပါးတော်၌ရှိသူ (မလာအိကဟ်) အပါးတော်စေတမန်တို့သည် ထိုအရှင်မြတ်အား ခ၀ပ်ခြင်းကို မပြုဘဲမာန်မာန ထောင်လွှားကြသည်မဟုတ်ချေ။ ထို့ပြင် ၎င်းတို့သည် ထိုအရှင်မြတ် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူကြောင်းကို မြွက်ဆိုကြသည့်ပြင်၊ ၎င်းတို့သည် ထိုအရှင်မြတ်အားသာလျှင်ပျပ်ဝပ်ဦးချ၍ နေကြကုန်သတည်း။
13#15#ထို့ပြင် မိုးကောင်းကင်၌ရှိသည်တို့သည် လည်းကောင်း၊ ပထ၀ီမြေ၌ရှိသည်တို့သည်လည်းကောင်း၊ မိမိစေတနာအလျောက်ဖြစ်စေ၊ စေတနာမရှိဘဲ မလွဲမရှောင်သာ၍ဖြစ်စေ၊ ထိုအရှင်မြတ်၏ရှေ့တော် မှောက်၌သာလျှင် ပျပ်ဝပ်ဦးချခယရိုကျိုးလျက်ရှိကုန်၏။ ထိုမှတစ်ပါး ယင်းတို့၏အရိပ်ဆာယာတို့မှာလည်း နံနက်ယံများ၌လည်းကောင်း၊ညနေခင်းများ၌ လည်းကောင်း၊(ထိုနည်းအတိုင်းပင် ပျပ်ဝပ်ဦးချခယရိုကျိုးလျက် ရှိကုန်သတည်း)။
16#50#၄င်းတို့သည် မိမိတို့အထက်၌လွှမ်းမိုးလျက် ရှိတော်မူသော မိမိတို့၏အရှင်မြတ်အား ကြောက်ရွံ့ကြလေသည်။ ထိုမှတစ်ပါး ၄င်းတို့သည် မိမိတို့အား ချမှတ်ပေးတော်မူသော အမိန့်တော်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြသည်သာတည်း။
17#109#၎င်းပြင် ထိုသူတို့သည် ငိုကြွေးလျက် မျက်နှာအောက်ချကြကုန်၏။ ၎င်းပြင် ယင်းကုရ်အာန် ကျမ်းတော်သည်ထိုသူတို့၌ ချစ်ကြောက်ရိုသေမှုကို ပိုမိုတိုးပွားစေပေသတည်း။
19#58#အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ကျေးဇူးပြုတော်မူခဲ့သောဤသူတို့ကား ဤနဗီတမန်တော်များပင်တည်း။ အချို့မှာ အာဒမ်၏သားသမီးများ၊ အချို့မှာ ငါအရှင်မြတ်သည်(နဗီတမန်တော်)နူဟ်နှင့်အတူ(သင်္ဘောပေါ်တွင်)တင်ဆောင်တော်မူခဲ့သော သူတို့၏သားသမီးများ၊ အချို့မှာ အစ်ဗ်ရာဟီမ်၏သားသမီးများ၊အချို့မှာ အစ္စရာအီလ်၏သားသမီးများ ဖြစ်ကြပေသည်။ ထို့ပြင် ၎င်းတို့အားလုံးမှာ ငါအရှင်မြတ် တရားလမ်းမှန် ညွှန်ပြတော်မူခဲ့သော၊ (ငါအရှင်မြတ်) ရွေးချယ်တော် မူခဲ့သောသူတို့အနက်မှလည်း ဖြစ်ခဲ့ကြကုန်သည်။ မည်သည့်အခါမျိုးမဆို ထိုသူတို့ရှေ့ဝယ် ရဟ်မာန်အနန္တကရုဏာတော်ရှင်၏ အာယတ်တော်များကို ဖတ်ကြားခဲ့ပါလျှင်၊ ထိုသူတို့သည် ပျပ်ဝပ်ဦးချလျှက် လည်းကောင်း၊ ငိုကြွေးကြလျက်လည်းကောင်း၊ (မြေသို့)ကျလာကြကုန်သတည်း။ (တစ်နည်း) အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ကျေးဇူးပြုတော်မူခဲ့သော သူတို့ကား အာဒမ်ဧ။် သားသမီးများအနက်မှလည်းကောင်း၊ငါအရှင်မြတ်သည် နုဟ်နှင့်အတူ (သင်္ဘောပေါ်တွင်)တင်ဆောင်တော်မူခဲ့သော သူတို့၏သားသမီးများအနက်မှလည်းကောင်း၊ အီဗ်ရာဟီမ်၏သားသမီးများအနက်မှလည်းကောင်း၊ အစ္စရာအီလ်၏သားသမီးများအနက်မှလည်းကောင်း၊ နဗီတမန်တော်များပင် ဖြစ်ကြသည့်ပြင် ငါအရှင်မြတ် တရားလမ်းမှန်ညွှန်ပြတော်မူခဲ့သော၊ ငါအရှင်မြတ်ရွေးချယ်တော်မူခဲ့သော သူတို့အနက်မှလည်း၊ ဖြစ်ခဲ့ကြကုန်၏ ။ မည်သည့်အခါမျိုးမဆို ထိုသူတို့ရှေ့ဝယ် ရဟ်မာန် အနန္တကရုဏာတော်ရှင်၏ အာယတ်တော်များကို ဖတ်ကြားခဲ့သည်ရှိသော်၊ ထိုသူတို့သည် ပျပ်ဝပ်ဦးချကြလျှက်လည်းကောင်း၊ ငိုကြွေးကြလျှက်လည်းကောင်း၊ (မြေပေါ်သို့)ကျလာကြကုန်သတည်း။်မှလည်း ဖြစ်ခဲ့ကြကုန်သည်။ မည်သည့်အခါမျိုးမဆို ထိုသူတို့ရှေ့ဝယ် ရဟ်မာန်အနန္တကရုဏာတော်ရှင်၏ အာယတ်တော်များကို ဖတ်ကြားခဲ့ပါလျှင်၊ ထိုသူတို့သည် ပျပ်ဝပ်ဦးချလျှက် လည်းကောင်း၊ ငိုကြွေးကြလျက်လည်းကောင်း၊ (မြေသို့)ကျလာကြကုန်သတည်း။ (တစ်နည်း) အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ကျေးဇူးပြုတော်မူခဲ့သော သူတို့ကား အာဒမ်ဧ။် သားသမီးများအနက်မှလည်းကောင်း၊ငါအရှင်မြတ်သည် နုဟ်နှင့်အတူ (သင်္ဘောပေါ်တွင်)တင်ဆောင်တော်မူခဲ့သော သူတို့၏သားသမီးများအနက်မှလည်းကောင်း၊ အီဗ်ရာဟီမ်၏သားသမီးများအနက်မှလည်းကောင်း၊ အစ္စရာအီလ်၏သားသမီးများအနက်မှလည်းကောင်း၊ နဗီတမန်တော်များပင် ဖြစ်ကြသည့်ပြင် ငါအရှင်မြတ် တရားလမ်းမှန်ညွှန်ပြတော်မူခဲ့သော၊ ငါအရှင်မြတ်ရွေးချယ်တော်မူခဲ့သော သူတို့အနက်မှလည်း၊ ဖြစ်ခဲ့ကြကုန်၏ ။ မည်သည့်အခါမျိုးမဆို ထိုသူတို့ရှေ့ဝယ် ရဟ်မာန် အနန္တကရုဏာတော်ရှင်၏ အာယတ်တော်များကို ဖတ်ကြားခဲ့သည်ရှိသော်၊ ထိုသူတို့သည် ပျပ်ဝပ်ဦးချကြလျှက်လည်းကောင်း၊ ငိုကြွေးကြလျှက်လည်းကောင်း၊ (မြေပေါ်သို့)ကျလလာကြကုန်သတည်း။
22#18#ဧကန်မလွဲ မိုးကောင်းကင်များ၌ ရှိသူတို့သည်လည်းကောင်း၊ ပထ၀ီမြေ၌ရှိသူတို့သည်လည်းကောင်း၊ နေသည်လည်းကောင်း၊ လသည်လည်းကောင်း၊ ကြယ် နက္ခတ်များသည်လည်းကောင်း၊ တောင်များသည် လည်းကောင်း၊ သစ်ပင်များသည်လည်းကောင်း၊ တိရစ္ဆာန်များသည်လည်းကောင်း၊ မြောက်များစွာသောလူတို့သည်လည်းကောင်း၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အားသာလျှင် ဦးချကြသည်ကို အသင်သည် မသိပါသလော။သို့ရာတွင် (လူတို့အနက်) မြောက်များစွာ သောသူတို့အပေါ်၌ပြစ်ဒဏ်သည် အတည်ဖြစ်လေပြီ။ စင်စစ်သော်ကား မည်သူအားမဆို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ဂုဏ်အသရေ ယုတ်ညံ့စေတော်မူပါလျှင်၊ ထိုသူအား (ဂုဏ်အသရေ) ချီးမြှင့်မည့်သူဟူ၍တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှပင် မရှိတော့ပြီ။ ဧကန်စင်စစ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် မိမိအလိုရှိတော်မူသည်ကို ပြုလုပ်တော် မူပေသတည်း။်သော်ကား မည်သူအားမဆို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ဂုဏ်အသရေ ယုတ်ညံ့စေတော်မူပါလျှင်၊ ထိုသူအား (ဂုဏ်အသရေ) ချီးမြှင့်မည့်သူဟူ၍တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှပင် မရှိတော့ပြီ။ ဧကန်စင်စစ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် မိမိအလိုရှိတော်မူသည်ကို ပြုလုပ်တော် မူပေသတည်း။
22#77#(Shafi’i)အို-မုအ်မင်န် သက်ဝင်ယုံကြည်သူ အပေါင်းတို့၊ အသင်တို့သည် မိမိတို့ အောင်မြင်ကြအံ့သောငှာ “ရုကုအ်”ဦးညွှတ်(၍နေ)ကြလေကုန်။ ထို့ပြင် အသင် တို့သည် “စဂ်ျဒဟ်”ပျပ်ဝပ်ဦးချ(၍နေ)ကြလေကုန်။ ၎င်းပြင် အသင်တို့သည်မိမိတို့ကို ဖန်ဆင်းမွေးမြူ တော်မူသောအရှင်မြတ်အားခဝပ်ကိုးကွယ်(၍နေ)ကြလေကုန်။ ထိုမှတစ်ပါး အသင်တို့သည်ကောင်းမြတ်သော အမှုကိစ္စများကိုလည်း ပြုလုပ်(၍နေ)ကြလေကုန်။
25#60#စင်စစ်သော်ကား ၎င်းတို့အား အသင်တို့သည် ‘ရဟ်မာန်’ ကြီးမားလှသော ကရုဏာတော်ရှင်အား ‘စဂျီဒဟ်’ ပျပ်ဝပ် ဦးချကြလေကုန်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါလျှင် ၎င်းတို့က ‘ရဟ်မာန်’ ဟူသည် အဘယ်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသင် အကျွန်ုပ်တို့အား အမိန့်ပေးသော အရာကို ‘စဂ်ျဒဟ်’ ပျပ်ဝပ်ဦး ချကြရပါမည်လောဟု ဆိုကြကုန်၏။ စင်စစ် (ဤပြောဆို ညွှန်ကြားမှုသည်) ၎င်းတို့၌ စက်ဆုပ်မှုကို ပိုမိုတိုးတက်စေခဲ့ပေသတည်း။
27#26#အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်(အကြင်အရှင်မြတ်ပင်)ထိုအရှင်မြတ်မှတစ်ပါး ခဝပ်ကိုးကွယ်ရာအရှင်ဟူ၍ အလျင်းမရှိပေ။ ကြီးကျယ်လှစွာသော ‘အရ်ရှ်’ ပလ္လင်တော်ကို စိုးပိုင်တော်မူသောအရှင်မြတ်ပင် ဖြစ်ပေသတည်း။
32#15#ငါအရှင်မြတ်၏ အာယတ်တော်များကို အကြင်သူတို့သည်သာလျှင် သက်ဝင်ယုံကြည်ကြကုန်၏။ ထိုသူတို့သည်ယင်းအာယတ်တော်များဖြင့် သတိပေးခြင်းကိုခံခဲ့ကြရသောအခါ ၎င်းတို့သည်(အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ရှေ့တော်မှောက်ဝယ်) စဂ်ျဒဟ် ပျပ်ဝပ် ဦးချလျက်ကျလာကြကုန်၏။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည် မိမိတို့၏အရှင်မြတ်အား ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွ(ထိုအရှင်မြတ်) စင်ကြယ်သန့်ရှင်းတော်မူကြောင်းကို မြွက်ဆိုကြသည့်ပြင် ၎င်းတို့သည် မာနထောင်လွှားခြင်း လည်း မရှိကြပေ။(စဂ်ျဒဟ်)
38#24#(ထိုအခါ) ထို(နဗီတမန်တော်) ဒါဝူဒ်သည်(ဤသို့)ပြောကြားခဲ့လေ၏။ ဤသူသည် အသင်၏ သိုးမကို ၎င်း၏သိုးမများနှင့် ပေါင်းရန်တောင်းဆိုခြင်းအားဖြင့် မုချမလွဲအသင့်အား မတရားပြုလုပ်ခဲ့လေ၏။ စင်စစ်မှာကားအီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးနောက် ကောင်းမြတ်သောအကျင့်သီလများကို ဆောက်တည်ကြသောသူတို့မှအပ များစွာသောစီးပွားဘက်တို့မှာ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး အမှန်ပင် မတရားကျူးလွန်လေ့ရှိကြ၏။ သို့ရာတွင် ထို(သက်ဝင်ယုံကြည် ၍ ကောင်းမြတ်သောအကျင့်သီလများကို ကျင့်မူဆောက်တည်ကြသော) သူတို့မှာမူကား လွန်စွာနည်းပါးလှ၏။ ထို့ပြင် (နဗီတမန်တော်)ဒါဝူဒ်သည် ၎င်းအား ငါအရှင်မြတ် စမ်းသပ်တော်မူခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ရိပ်မိခဲ့လေ၏။ သို့ဖြစ်ပေရာ ထိုဒါဝူဒ် သည် မိမိအရှင်မြတ်အထံတော်တွင် ခွင့်လွှတ်ချမ်းသာ ပေးတော်မူပါမည့်အကြောင်း တောင်းပန်အသနားခံ၍ ဦးညွှတ်ကျလာခဲ့၏။ ထိုမှတစ်ပါး (မိမိအရှင်မြတ်အထံတော်သို့) စိတ်ထားဖြူစင်စွာ ပြန်လှည့်ခဲ့လေ၏။င့်မူဆောက်တည်ကြသော) သူတို့မှာမူကား လွန်စွာနည်းပါးလှ၏။ ထို့ပြင် (နဗီတမန်တော်)ဒါဝူဒ်သည် ၎င်းအား ငါအရှင်မြတ် စမ်းသပ်တော်မူခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ရိပ်မိခဲ့လေ၏။ သို့ဖြစ်ပေရာ ထိုဒါဝူဒ် သည် မိမိအရှင်မြတ်အထံတော်တွင် ခွင့်လွှတ်ချမ်းသာ ပေးတော်မူပါမည့်အကြောင်း တောင်းပန်အသနားခံ၍ ဦးညွှတ်ကျလာခဲ့၏။ ထိုမှတစ်ပါး (မိမိအရှင်မြတ်အထံတော်သို့) စိတ်ထားဖြူစင်စွာ ပြန်လှည့်ခဲ့လေ၏။
41#38#သို့ရာတွင် အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်(ဤအမိန့်တော်ကို လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းမရှိဘဲ)မာန်မာန ထောင်လွှားခဲ့ကြလျှင်၊ အသင့်အား ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသော အရှင်မြတ်၏ထံတော်ပါး၌ရှိကြသော မလာအိကဟ် ကောင်းကင်တမန်တို့မူ နေ့ရောညဥ့်ပါ ထိုအရှင်မြတ်စင်ကြယ် သန့်ရှင်းတော်မူကြောင်းကို မြွက်ဆိုလျက်ရှိကြကုန်၏။ ထိုမှတစ်ပါး ၎င်းတို့သည်ငြီးငွေ့ကြသည်ပင် မဟုတ်ပေ။
53#62#သို့ဖြစ်ပေရာ အသင်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ရှေ့တော်မှောက်ဝယ် ‘စဂ်ျဒဟ်’ ပျပ်ဝပ်ဦးချကြ လေကုန်။ထိုမှတစ်ပါး အသင်တို့သည် (ထိုအရှင် မြတ်အားသာလျှင်)ကိုးကွယ်ကြလေကုန်။ (စစ်ဂျဒဟ်)
84#21#ထိုမှတစ်ပါး ၎င်းတို့ရှေ့၌ ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ် ဖတ်ကြားသောအခါဝယ် ၎င်းတို့သည်(မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်) ပျပ်ဝပ်ဦးချခြင်း မပြုကြသနည်း။
96#19#အလျှင်းမဟုတ်၊ (အို-နဗီတမန်တော်) အသင်သည် ၎င်း၏စကားကို မလိုက်နာလေနှင့်၊ ထို့ပြင် အသင်သည်(အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား) စဂ်ျဒဟ် ပျပ်ဝပ်ဦးချပါလေ။၎င်းပြင် အသင်သည် (၀တ်ပြု ခြင်းအားဖြင့် ထိုအရှင်မြတ်အပါးတော်သို့) ချဉ်းကပ် ပါလေ။ (စစ်ဂျဒဟ်)
One thought on “Sajdat al-tilaawah with Myanmar Translations”
စဂျဒဟ် ဦးချခြင်းဆိုင်ရာ ကုရ်အာန် ဗျာဒိတ်များကို တစ်နေရာတည်း စုပေါင်းဖေါ်ပြ ထားတဲ့အတွက် ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန်ကို လေ့လာဆည်းပူးသော မွတ်စလင်မ်များ အတွက် အလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။